Olee otú ịchọ ma na-achọta mmasị songs on YouTube
E nwere ọtụtụ pụrụ ịdabere na egwu ụzọ mee ka n'aka na songs na-abụghị nanị hụrụ na YouTube ma na-kwukwara na mmasị ndepụta. Iji jide n'aka na ihe kasị mma e nyere onye ọrụ na nke a na YouTube eme mgbe nile ka n'aka na ndị na-abụghị nanị na kwalite ma na-merela agadi na okwu nke technology ka ọ na-eme n'aka na onye ọrụ na-arụpụta ihe kasị mma. N'elu ụzọ ịchọ, na-na-egwu mmasị songs bụ ime ka n'aka na dị iche iche search engine compatibilities na-eji na nke a. The kasị gara search engine nke ụwa bụ Google ebe fọrọ nke nta 1 nde searches na-eduzi kwa awa nke bụ nnọọ ọnụ ọgụgụ buru ibu otú a nkuzi ga isi na functionalities nke Google dị ka ọ na-dịkwa n'ebe ụmụ mmadụ YouTube otú ahụ isiokwu na-aghọ mfe. Na-esonụ bụ n'elu 8 ụzọ ịchọ ma na-achọta mmasị songs on YouTube:
3. YouTube kasị achọgharị
4. Site listi ọkpụkpọ
5. Top gosiri songs na vidiyo
6. Top listi ọkpụkpọ
7. Top gosiri music
Google bụ kasị search engine nke ụwa na maka otu ihe ahụ ọ ga-eji na-eme ka n'aka na nkuzi na-aghọ mfe na onwe reliant. Iji nweta ihe kasị mma nke echiche onye ọrụ kwesịrị imeghe Google search engine ie https://www.google.com/?gws_rd=ssl
Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na aha nke song na-chọọ sochiri YouTube ihe atụ RAP Chineke YouTube:
Ka anya dị ka results gbagote onye ọrụ nwere ike pịa ọ bụla nke ndị na-eme ka n'aka na song na-egwuri na YouTube.
Onye ọrụ kwesịrị imeghe YouTube iji jide n'aka na usoro amalite:
Search mmanya a na-ahụ na-tinye n'ọrụ iji na-enweta chọrọ search results:
The mkpa song nwere ike mgbe ahụ na-egwuri enweghị ihe ọ bụla nke:
Ọ bụkwa otu nke mfe ụzọ na-eme ka n'aka na YouTube songs na-achọgharị enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Onye ọrụ dị nnọọ mkpa ileta https://www.youtube.com/ na isi na peeji o nwere ịchọ ndebanye aha:
The song ọwa onye ọrụ na-tụrụ ụtụ a ga-emere peeji na-esonụ nke ọzọ na onye ọrụ nwere pịa iji jide n'aka na n'elu depụtara na ọtụtụ anya songs na-hụrụ na n'elu nke na peeji nke. Ọ bụ a ndabere onu na e n'ọrụ site YouTube na maka otu ihe ahụ onye ọrụ nwere ike inwe arụpụta ihe kasị mma enweghị ihe ọ bụla nke.
Onye ọrụ kwesịrị ileta https://www.youtube.com/ mere na isi na peeji na-egosi:
Ụzọ na-mgbe ahụ a ga-agbaso bụ Ndetuta egwu ọkpụkpọ> Mmasị na videos:
Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na ndị ọkacha mmasị song ma ọ bụ video na a mmasị na n'oge gara aga na-abụghị nanị na-egwuri ma ụtọ dị ka nke ọma. Iji usoro a ọ bụ nnọọ mfe iji jide n'aka na vidio na-egwuri ma nwee mmasị enweghị ihe ọ bụla hassle na onye ọrụ na-nwere iji jide n'aka na-eso nke a usoro ọzọ na ndị ọzọ videos agbakwunyere na mmasị playlist mere na-achọ mgbe ahụ mgbe-anọgide na- nke na a regard
Onye ọrụ kwesịrị ileta https://www.youtube.com/videos iji jide n'aka na n'elu gosiri videos na-egosipụta na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na n'ime ndepụta a na e nwere niile songs na ndị ọzọ na stof na onye ọrụ chọrọ ntị. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ nwekwara ike ịchọ ọdịnaya na search mmanya na bụ na n'elu nke na peeji. Nke a search mmanya ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi songs na na-metụtara nke a na peeji naanị na ọ bụghị na niile YouTube.
Onye ọrụ kwesịrị ileta peeji ie https://www.youtube.com/channel/UCF0pVplsI8R5kcAqgtoRqoA iji jide n'aka na interface na bụ mkpa ka URL ogosiri dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
Onye ọrụ ahụ kwesịrị ka pịa listi ọkpụkpọ taabụ n'elu nke na peeji nke n'ihu n'ihu na nke a:
N'ime ndị a n'elu anatara e nwere niile music na metụtara videos nke a onye ọrụ nwere ike na-eche nke. Ịchọta na mgbe ahụ na-eme ka n'aka na top songs na-egwuri bụghị a egwuregwu n'ihi na onye ọrụ na niile ugbu a dị ka usoro dị nnọọ mfe ma n'ụzọ kwụ ọtọ.
Onye ọrụ kwesịrị ileta https://www.youtube.com/channel/UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ iji jide n'aka na-esonụ na peeji na-egosi enweghị ọtụtụ hassle:
Onye ọrụ ugbu a, nwere iji jide n'aka na taabụ ndị na-n'elu nke na peeji na-navigated. A na-agụnye n'ụlọ, videos, listi ọkpụkpọ, ọwa na banyere. Ọ bụ ihe niile banyere music na onye ọrụ nwere ike na-ihe kasị mma nke ọ na-enweghị ihe ọ bụla hassle. A njikọ a na-ugboro ugboro emelitere site na mmepe enweghị ihe ọ bụla hassle na nke na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ nwere ike ịhụ n'ebe ọ bụla ọzọ na dum YouTube nke dị mma ka tụnyere peeji nke na e kwuru ebe a.
The onye ọrụ nwere ileta https://www.youtube.com/playlist?list=PLFgquLnL59alCl_2TQvOiD5Vgm1hCaGSI mere na-esonụ na peeji na-egosi na okirikiri nhọrọ ukwuu na e kwuru okwu ya na screenshot na e pasted n'okpuru:
Onye ọrụ nwere ike eme ka ahụ n'aka na mkpa music video a na-ahụ na-egwuri enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na nke a na peeji e nọgidere na-enwe site YouTube mmepe otú ọ na-adịkarị emelitere na onye ọrụ nwere ike inwe arụpụta ihe kasị mma mgbe a na peeji nke e gara.
The depụtara ndị top 8 ụzọ na a onye ọrụ nwere ike ime iji jide n'aka na-ewu ewu music na-achọgharị na YouTube. Ọ na-na--ahụ kwuru na ụzọ na e kwuru ebe a bụ ndị nke na-emetụtachaghị saịtị onwe ya na maka otu ihe ahụ ụzọ ndị a na-enye onye nke kasị mma na nke kasị elu ụzọ nke na-eme n'aka na video nke music na-na-achọgharị. The ụzọ na e kwuru na aga Nkuzi nwekwara ike-etinyere jide n'aka na mmasị music na-na ibudatara YouTube.
Rịba ama: Download free internet music na TunesGo
Nyefee gị Music N'etiti Devices (iOS / Android)
> Resource> Video> Olee-Chọọ na Chọta Favorite Songs on YouTube